परीक्षा हलमै विद्यार्थीले चु’रो’ट ताने , भिडियो खिचेर टिकटकमा हाले ! – Namaste Host
March 22, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on परीक्षा हलमै विद्यार्थीले चु’रो’ट ताने , भिडियो खिचेर टिकटकमा हाले !
प्रअ साहका साथै त्यो दिन गा’र्ड बसेका शिक्षकलाई समेत का’रवाहीको माग गरिएको हो । हे’डमास्टर साहका अनुसार, विद्यार्थी शिवम यादवलाई तेस्रो समेस्टरको परीक्षा र’द्द गरिएको हो । उनले भने, “शिवम यादव यसपाली अब पा’स हुन सक्दैन, फेरी एक वर्ष कक्षा ९ मै बस्नुपर्छ ।” भिडियो